Slick online shopping deals – Early Black Friday | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » Slick online shopping deals – Early Black Friday
Slick online shopping deals – Early Black Friday
Posted by kai on Nov 19, 2010 in News, Steal Deal | 8 comments
Black Fridayတဲ့..။ နောက်တပါတ် သောကြာနေ့ကိုခေါ်တာပါ။ နိုဝင်ဘာရဲ့နောက်ဆုံးအပတ် သောကြာနေ့ -Thanksgivingပြီးသောကြာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဆိုင်တွေဈေးချရောင်းတာမှာ တဝက်ဈေး၊ သူခိုးဈေး စသဖြင့် တနှစ်လုံးမှာအစွမ်းကုန်ုလျှော့တာမို ့အဲဒီနေ့မနက် ၄နာရီလောက်ကစပြီး လူတွေ တိုးဝှေ ့နေကြ၊ ဈေးလုဝယ်ကြတာပါပဲ..။ တိုးကြလွန်းလို့ လူတောင်သေပါတယ်.. အခုဈေးတွေကတော့ အကြို အမဲရောင်သောကြာအတွက်ပါ။ လေ့လာဝယ်နိုင်ကြပါစေကြောင်း..။
Black Friday (sometimes Green Friday) is the Friday following Thanksgiving Day in the United States, traditionally the beginning of the Christmas shopping season. The term dates back to at least 1966, although its usage was primarily on the East coast. The term has become more common in other parts of the country since 2000. Because Thanksgiving falls on the fourth Thursday in November in the United States, Black Friday occurs between the 23rd and the 29th of November. According to Reuters, in 2007 135 million people participated in the Black Friday shopping rush.
၁၅.၆လက်မ အင်တဲလ် အိုင်ကိုးပရောစက်ဆာနဲ့ လပ်တော့ပ်ကို ရှာနေလို့ ဆွိဒီးလ်လေးများ တွေ့ရင်ပြောကြပါဗျို့။
ASUS A52F-XT2 Laptop Computer – Intel Core i5-460M 2.53GHz, 4GB DDR3, 320GB HDD, Blu-ray Player/DVDRW, 15.6″ Display, Windows7Home Premium 64-bit, Gray, 1-Year Accidental Damage
တပါတ်ပဲစောင့်ဗျာ..။ နောက် ၅ဝ မက ဈေးထပ်ကျမယ်လို့ အာမခံတယ်..။
Best Buy ကဒီနှစ်တော်တော်လျှော့မယ်ပြောတယ်..။
ကျုပ်ကတော့ 128GB SATA SSD ပေါချောင်ကောင်းစောင့်နေတာပါ..။ တွေ့ရင်ပြောကြပါကွယ်… ကျေးဇူးဆပ်ပါမည်..။
ကိုခိုင်ပြောတာတော့ မတွေ့သေးဘူး၊ ဒီမနက် spoofee.com မှာတင်ထားတာတွေ့လို လက်တို့လိုက်သည်။
Newegg.com has the Samsung Spinpoint F4 HD204UI 2TB 5400 RPM 32MB Cache SATA 3.0Gb/s 3.5″ Internal Hard Drive foragood price.
Pricegrabber Price : $130.00 Shipped
1. Newegg Price : $99.99 Shipped
2. Use coupon code SAMSUNG222 to get $20 off
Final Price : $79.99 Shipped
ဟီဟိ ငချဉ် တစ်ယောက်တော့တွေ ့ပြီ ပွတာဘဲ
ကျွန်တော့် ကောင်လေး ပြန်ထုခြင်လို ့ဗျာ
ကိုပု ခင်ဗျားကောင်လေးထုခြင်တာ ကျုပ်ကိုလာပြောရအောင် ဘာမှတ်နေသလဲ။ ဒီကနွားသိုးဗျ။
snake snake see the leg တဲ့ ~~
ကျေးဇူးပါ ကိုခိုင်၊ ဘလက်ဖရိုင်းဒေး အွန်လိုင်းဒီးလ်ကို ပိုစိတ်ဝင်စားပါသည်။ အင်စတိုးဒီးလ်ကတော့ ဘယ်တုန်းကမှ မမှီဘူးလို့ လက်လျော့ထားပါသည်။ တွေ့ရင်ပြောပါအုံး။
ကျေး ဇူး ဗျာ … ကျွန် တော်. က တော. နောက် နှစ် ကို ပဲ စောင်. တော. မယ် .. ဒီနှစ် ရ ပိုင် ခွင်. က ကုန် ပြီ ဗျာ ….